Mampitombo ny gripa ny famoahana sakafo mahavelona ary manamafy ny fitsaboana ny: fikarohana vao haingana
Inona no vokatra azon'ireo mpikaroka? Inona no biby hita fa manimba? Mihena ny aretim-panafody dia miharatsy kokoa ny otrikaretina Inona no tert-butyl hydroquinone? Famenon-tsakafo ara-tsakafo ao amin'ny hena misy hena, trondro, atody na fromazy
Famerenan'ny postpartum: fahasarotana sy ny fomba hisorohana izany
Ny fitondrana ny foetus, ary avy eo ny famahana ny fitondrana vohoka dia miteraka enta-mavesatra lehibe ho an'ny rafitra rehetra amin'ny vatana. Ny fo, lalan-drà, taova ny rafitry ny endocrine mijaly, manelingelina ny rafitry ny hormonina, ary koa ny rafitry ny musculoskeletal, tsy midika akory hoe ny rafi-pampianarana. hatsarana
Ny volo very: ny fanafody vaovao dia hita ny manafaingana ny fitomboan'ny volo.
Inona no vokatra azon'ny mpahay siansa? Ny WAY-316606 dia manampy amin'ny fahaverezan'ny volo WAY-316606 dia torontoronina ho fanafody ho an'ny osteoporosis, fa tsy balsilo Cyclosporin A mamela ny volo hihodina indray maninona no mihintsana ny volo? Ny fihenan'ny volo dia fahita matetika amin'ny lehilahy antitra.
Ny fandinihana nataon'ny OMS: namantatra ny antony nahatonga ny lehilahy maty aloha kokoa noho ny vehivavy
Fahasamihafana eo amin'ny fiainana anton-javatra biolojika sy ara-tsosialy antony antony fikarohana Monastic: velona ny moanina raha mbola masera ny World Health Organisation (WHO) mikarakara ny mahasoa ny mponina maneran-tany. Amin'izao fotoana izao,
Nitombo be ny isan'ny marary voan'ny gonorea: mampitandrina ny fanairana ny dokotera
Ny fihanaky ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia mihamitombo.Ny mpiara-miasa dia tsy maintsy mahafantatra ny aretina. Ahoana no hisorohana ny gonorea? Ny fotsifotsy mavo, ny mena ary ny fanaintainana sasany dia soritr'aretina miteraka fahatsapana malefaka.
Miantso ny vaksiny TBE ny manampahaizana momba ny fahasalamana
Ny isan'ny trangan'ny TBE amin'ny firaketana vaovao dia mitatitra aretina isan-karazany Iza no mila vaksiny? Manomboka amin'ny aprily ka hatramin'ny septambra dia tsy antenaina ny aretina raha toa ka tsy mahasakana an'io aretina io ny vaksiny aorian'izay.
Biorhythm: nahoana ny maraina no misy areti-mifindra atahorana kokoa?
Misy olona manelingelina ny aretina ve? Ny maraina no fotoana mampidi-doza indrindra amin'ny otrikaretina virus.Nahoana ny aretina sasany matetika mitranga amin'ny ririnina? Ny vaksinin'ny gripa maraina dia mandaitra kokoa noho ny areti-mifindra amin'ny maraina